Izinyathelo Ezi-8 Zokwakha Amakhasi Wokufika Osebenzayo | Martech Zone
The ikhasi lokufika ngesinye sezisekelo eziyinhloko ezizosiza ikhasimende lakho ukuthi lihambe ohambweni lomthengi walo. Kepha kuyini ngempela? Futhi okubaluleke kakhulu, lingakhulisa kanjani ibhizinisi lakho ngokukhethekile?
Ukufingqa, i ikhasi lokufika elisebenzayo yakhelwe ukwenza okungenzeka ukuthi ikhasimende lithathe isinyathelo. Lokhu kungaba ukubhalisela uhlu lwe-imeyili, ukubhalisela umcimbi ozayo, noma ukuthenga umkhiqizo noma insizakalo. Ngenkathi inhloso yokuqala ingahluka, umphumela uyefana. Futhi lokho ukuguqula iklayenti libe ikhasimende elikhokhelayo.
Manje njengoba sesichaze ukuthi liyini ikhasi lokufika, ake sikhulume ngezinto ezenza ukuthi libe yifayela le- isixazululo sokwakha sewebhu esiphoqayo. Nazi izinyathelo ongazilandela ukwenza ikhasi lakho lokufika lingenakuvinjelwa.
Isinyathelo 1: Chaza izethameli zakho eziqondiwe
Ngaphambi kokuthi uqale ukubhala, kufanele ube nombono ocacile wokuthi izithameli zakho ezibhekiswe kuwe zingobani. Dala i-persona yekhasimende ngokunikeza izici ezithile ezifana nobudala, ubulili, izinga lemfundo, umsebenzi, imali engenayo yenyanga, nokuningi.
Ngokwenza lokhu, uzokwazi ukuhlela umyalezo wakho ngokucacile, ubheke iphuzu elithile lobuhlungu, futhi uchaze inzuzo yomkhiqizo wakho. Ngemuva kokuchaza izithameli zakho, dlulela esinyathelweni esilandelayo.
Isinyathelo 2: Sebenzisa Umthetho Wokubuyisana
Izazi zokusebenza kwengqondo yomphakathi zibhekisa kulesi simo njengesifiso esijulile sokuphindisela umusa noma nini lapho othile akwenzela okuthile okuhle. Amasampula amahhala, umbiko onemininingwane, noma ngisho nohlu olulula lokuloba kokubhala ezinye zezipho izinkampani ezizisebenzisayo ukusebenzisa leli qhinga.
Ngakho-ke ake sithi uzama thola i-imeyili yekhasimende noma ubhalisele uhlu lwama-imeyili. Ungabathembisa isiphakamiso senani eliphezulu ukubakhuthaza ukuthi bathathe isinyathelo. Futhi uma unikeza okuthile okubalulekile, bazocabanga ukuthi lokho okunikelayo kungcono kakhulu.
Isinyathelo 3: Bhala Isihloko Esiphoqayo Nesihloko Esingezansi
Isihloko siyisihlakala sakho esikhulu sokukhwelisa ikhasimende; i-head-turner edonsa ukunaka kwabo. Kudinga ukuveza iphuzu lakho ngokucacile nangokufishane. Okwamanje, isihlokwana sinikeza imininingwane eyengeziwe ngomkhiqizo noma insizakalo yakho ukwenza iklayenti lihlale futhi lazi kabanzi.
Lapho ubhala zombili, hlala uguqula isici sakho sibe yinzuzo. Isibonelo, uma uthengisa i-smartphone enempilo yebhethri ende, ungakhulumi nge-mAh yayo (milliampere-hour). Esikhundleni salokho, yithi "Binge-bukela uhlelo lwakho oluthandayo lwe-Netflix ngasikhathi sinye." Ngale ndlela, utshela ukuthi umkhiqizo ungathinta kanjani impilo yezithameli zakho futhi uxazulule iphuzu elithile lobuhlungu empilweni yabo.
Isinyathelo 4: Nikeza Ubufakazi Bomphakathi
Ubufakazi bezenhlalo buyinto ebalulekile ekhasini lakho lokufika njengoba kukhombisa ikhasimende lakho ongaba nalo ukuthi abantu sebevele bayazuza kuzici zomkhiqizo wakho.
Abathengi abangama-88% bathemba ukubuyekezwa komsebenzisi njengokuncoma komuntu siqu.
Ngakho-ke zama ukuthola ubufakazi kumakhasimende ajabule futhi ubuke izinga lakho lokuguqulwa likhuphuka. Ngemuva kwakho konke, abantu bavame ukulandela umhlambi. Futhi lapho umhlambi wanelisekile, amaklayenti angaba khona azozama ukungena esenzweni ukuze abe yingxenye yesipiliyoni.
Isinyathelo 5: Bhekisa amaphuzu obuhlungu eVistors nokuthi Uwaqeda kanjani
Ake sithi uthengisa uhlelo lwasekhaya lwabaqalayo. Elinye iphuzu lakho lobuhlungu lapha ukuthi iklayenti lakho lingaba nezinkinga zokuzethemba ezibangelwa isisindo sabo. Mhlawumbe banenkinga yokungena ezingutsheni zabo futhi lokhu kuthinte impilo yabo yezenhlalo.
Manje, umsebenzi wakho ukudala ikhasi lokufika eligcizelela leli phuzu lobuhlungu bese uliqeda usebenzisa insiza yakho. Isihloko sakho singabukeka njengokufana:
Thola inani elizamazelayo ngokunethezeka ekhaya lakho. Or Lungiselela lelo bhishi lolwandle ihlobo.
Ngemuva kwalokho ungakulandela ngesihloko esinqandayo:
Lolu hlelo lokuzivocavoca ekhaya lwenzelwe ukukunciphisela phansi ngaphandle kokuthembela kwimishini, imithi, noma amagiya aphezulu. Konke okudingayo isikhathi, ukugqugquzela, nokugaya okungaguquguquki.
Isinyathelo 6: Qondisa Izivakashi Kubizo Lokwenza
Ngemuva kokufaka lezi zinto esesikhulume ngazo, sekuyisikhathi sokwakha i-Call to Action yakho. Kumele ibe mfushane, ibonakale futhi isebenzise ulimi olukholisayo. Masinamathele ohlelweni lokuzivocavoca ekhaya njengesibonelo.
Esikhundleni sokuxazulula okwejwayelekile uhambise inkinobho ukuthola i-imeyili yabo, ungayinonga ngokusho Joyina iqembu or Qala ukushisa lawo mafutha namuhla. Kufanele futhi usebenzise ihluzo ezihehayo ukuhola ikhasimende ngqo kwi-call-to-action (CTA). Ngaphezu kwalokho, sebenzisa imibala ehlukile ukusiza yenza inkinobho ivelele.
Isinyathelo 7: Test, Test, Test… Konke
Vele, kusadingeka wenze ukuhlolwa kwe-A / B ukukhulisa amazinga akho wokuguqulwa. Hlola yonke into… kusuka kuzici zedizayini, izithombe, amafonti, izihloko zezindaba, izihlokwana, izithombe, izinkinobho, ukubizelwa ezenzweni… konke. Ukuhambisa isu lekhasi lokufika akupheli ngaphandle kwesu lokuhlola.
Ukuhlola amakhasi amaningi kumuntu namadivayisi ahlukile okuthenga nakho kuyisu elihle. Uma kuyisu le-B2B, ngokwesibonelo, ungahle ufise ukuba nekhasi lokufika elenzelwe umkhakha ngamunye owusebenzelayo. Noma uma kuyikhasi lokugxila eligxile kubathengi, ungahle ufise ukwenza ngezifiso okuqukethwe nezithombe ngeminyaka, ubulili, indawo.
Isinyathelo 8: Sebenzisa Ipulatifomu Lekhasi Lokufika
Ukuklama ikhasi lokufika elisebenzayo akudingi umzamo noma isikhathi lapho unesisombululo esifanele sekhasi lokufika. Izixazululo zekhasi lokufika zikunika amandla okwakha amakhasi amahle wokufika ngekhono lokuziphinda, ukuvivinya, ukuhlanganisa, nokuhlela ngamandla.
Hlola Ukufaka, kuyisixazululo sekhasi lokufika esilula ukusebenzisa esizokunika amandla okusebenzisa izeluleko ezikule ndatshana!
Qala Isilingo noma Thola iDemo ye-Instapage
Kusuka Kumakhasimende Abangahle Kuye Kubalandeli Be-Raving
Ikhasi lokufika elinamandla lingakhuphula izinga lokuguqulwa kwakho futhi lisize ukukhulisa ibhizinisi lakho ngokushesha. Ngokulandela lezi zinyathelo ezingenhla, uzokwandisa ukusebenza kwekhasi lakho lokufika kusukela lapho uqala khona futhi wehlise isikhathi sokulilungisa. Mane ukhumbule ukuhlala ubeka inani ngaphezu kwakho konke okunye futhi uzoguqula amaklayenti angaba khona abe abalandeli ababhangayo ngokushesha.
Ukudalula: Martech Zone iyinhlangano ephethwe yi Ukufaka!
Tags: ikhasi lokufika elisebenzayoUkufakaikhasi lokufikaukuklanywa kwekhasi lokwakhaizihloko zezindaba zokufikaukufika kwezinyathelo zekhasiamathiphu ekhasi lokufikaisihlokwanaubufakazi
UStefanie Siclot uyingxenye yethimba le-SEO ku- Ukukhula Rocket, inkampani yezentengiso yedijithali ezinze eLos Angeles. Unesibopho sokwandisa ikhwalithi nobungako bethrafikhi yewebhusayithi okusho ukuthi kumnandi kuye.
Izibalo ze-Ecommerce: Umthelela Wobhadane Lwe-COVID-19 kanye ne-Lockdowns Ekuthengiseni naku-Intanethi
Izitayela Zokuxhumana Kwedijithali ezingama-2021 Ezizothuthukisa Ibhizinisi Lakho